Saadaq Joon oo laga joojiyay baaritaan ku socday | KEYDMEDIA ONLINE
Saadaq Joon oo laga joojiyay baaritaan ku socday
Saadaq Joon ayaa ahaa shaqsigii hogaaminayay weerarkii December 2017 lagu qaadey guriga uu C/raxmaan C/shakuur ka degan yahay Muqdisho, halkaasi oo dhowr askari lagu dilay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Qaramada Midoobey ayaa Arbacadii shalay sheegtay in taliyaha booliska gobolka Banaadir Sareeye Guuto Saadaq Cumar Maxamed (Saadaq Joon), lagu waayay caddeyn tuhunka la xiriira inuu xiriir la leeyahay Al-Shabaab.
Warbixintiisii ​​ugu horreysay ee uu siiyay Gollaha Amniga ee Qaramada Midoobay, Guddoomiyaha Guddiga Khubarada, Philippe Kridelka, wuxuu sheegay in Saadaq Joon laga saarey liiska, islamarkaana hadda aan wax baaritaan ah ku socon.
"Kuma helin wax caddeyn ah oo muujinaya in Saadaq Joon uu xiriir la leeyahay Al-Shabaab kadib markii aan dib u eegis ku sameynay macluumaadka ay u soo gudbisay Kooxdii la socodka cunaqabateynta Soomaaliya iyo Ereteriya, waxaan adiin sheegayaa in Saadaq aan baaritaan ku heynin gudiga," ayuu yiri Philippe Kridelka.
Dowladda Soomaaliya ayaa u diiday guddiga inuu yimaado dalka sannadka 2019-ka, iyadoo la siin waayay ogolaansho in baaritaan ku sameeyaan shaqsiyaadka dhibaatada ka shaqeynaya, shirkadaha ganacsiga ee dhaqaalaha siiya Al-Shabaab iyo siyaasiyiinta qaswadiyaasha ah.
Mareykanka ayaa dalbaday in lasoo cusbooneysiiyo cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, iyadoo lagu soo darayo waxyaabaha laga sameeyo qaraxyada ee loo iib geeyo dalka, si lopga hortago inay Al-Shabaab hesho maadooyinka qaraxyada ka farsamayso.
0 Comments Topics: al-shabaab booliska gobolka banaadir gollaha amaanka